Maalin: Janaayo 21, 2019
Marmaray 4 wuxuu adeegsanayaa Usküdar iyo Kazlıçeşme ilaa Maarso
Adeegyada Marmaray ay maamusho Agaasimaha Guud ee TCDDHalkalı Marka la eego baaxadda Hagaajinta Lines-ka-hoose, inta u dhaxaysa 21 Janaayo-4 Maarso 2019, Üsküdar-Kazlıçeşme [More ...]
Türk Ytong, oo ah hogaamiyaha warshadaha qalabka dhismaha, wuxuu horumariyay 'Ytong Noise Barrier', oo ah xalka dhaqaalaha iyo deegaanka si loo yareeyo saameynta wadada iyo dhawaqa taraafikada ee dadka deggan. ytong [More ...]
IZBAN'da Ka dib markii la mamnuucay ganaaxii lagu soo rogay
Maamulka IZBAN wuxuu horey u soo bandhigay 30 boqolkiiba kor u qaadida boqolkiiba 0. Jawaab-celinta ka bixitaanka soo-jeedinta ayaa timid. Maamulka IZBAN ayaa isku dayaya inuu u rogo xayiraada shaqo joojinta inuu u noqdo fursad, sida uu sheegayo Metehan UD oo ka socota Evrensel [More ...]
Imtixaanku wuxuu bilaabmayaa Kabatas-Mahmutbey Metro Line!
Xisaabinta loogu talagalay wadista gawaarida tijaabinta waxay ku bilaabatay khadka metrooga M7 Kabataş-Mahmutbey, khadka labaad ee bilaa darawalnimada ee Istanbul iyo kooxda koowaad ee Yurub. Xariiqda 19 km, oo ka kooban saldhigyada 20, waxay sii wadeysaa electromechanical iyo [More ...]
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in barnaamijyada tababarka aasaasiga ah ee badaha hiwaayadda ay bilaabeen in lagu bixiyo lacag la’aan si dadka loogu jeediyo badda si ay awood ugu yeeshaan inay arkaan wax ka baxsan. [More ...]
Laba khadadka cusub ee tareenka ayaa lagu dhisi doonaa Qorshaha Gaadiidka Master kaas oo go’aamiya nooca gaadiidka Bursa ee 2035. Çalı, Görükle, Yunuseli, Station Bus, Demirtas, iwm. [More ...]
RepZ Waxyaabihii shaqo-joojinta IZBAN ee dib loo dhigay amarkii madaxweynaha ayaa sii socda. Duqa magaalada Izmir Aziz Kocaoglu ayaa sheegay in heshiiska wadajirka ah lagu saxiixi doono dhowr. Hüseyin Ervüz, Gudoomiyaha Ururka Ganacsiga Tareenka - ayaa sheegay inaysan jirin soo jeedin ka timid garabka degmada. [More ...]
Muwaadiniinta ku sugan 20 Thousand ayaa kulan la yeeshay Festival Uludağ
Bandhigga Jiilaalka Uludağ, oo ay soo qabanqaabisay Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa markii saddexaad ee sanadkan, ayaa isu keenay in ka badan kun kun oo muwaadiniin ah kulanka. Laga soo bilaabo 20 illaa 7 oo leh kartoonno qalooc ah tartan tartan, munaasabado caag ah oo caag ah iyo igloo sameynta munaasabadaha [More ...]
11 km 3 inta u dhaxaysa Varsak-Otogar halkaas oo Antalya Metropolitan Municipality ay ku dhammaysay shaqooyinka xawaare aad u weyn. Howlaha Nidaamka Tareenka ee Marxaladda Naafada ayaa dhammaaday. Gawaarida 4 si ay u qaadaan rakaabka ayaa hoos loogu dhigay isgoysyada. Wadada taraamka [More ...]
Kocaoglu: Izmir Izmir ayaa ka dhigtay baaxad weyn oo lagu maalgeliyo nidaamka tareenka ee Koca
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, ayaa magaalada isugu yimid xubno ka tirsan saxaafadda oo bayaan muhiim ah ka soo saaray ajendaha. Kocaoglu ayaa ugu horeyn kahadlay howlaha degmada iyo maalgashiga. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ee 2018 [More ...]
RayHaber 21.01.2019 Warbixinta Shirka